Qaadashada laysanka iyo magaalooyinka | Somaliska
Warbixin ay soo saartay Laanta Isku Socodka ayay ku soo bandhigtay magaalooyinka kala duwan ee Sweden iyo tirada dadka ku baasa imtixaanka Laysanka. Magaalada Skellefteå ee waqooyiga Sweden ayaa ah mida ugu fudud ee dadku ay ku baasaan imtixaanka ayadoo 70% dadka imtixaanka gala ay baasaan. Farsta oo ka tirsan Stockholm ayaa in ka yar 40% ay ku baasaan imtixaanka. Arintaan ayaa lagu macneeyay in dadka ku nool Skellefteå ay iskuulada dhigtaan halka Farsta dadkeedu ay mashquul yihiin oo aysan iskuulka si toos ah u dhigan. Balse arintaas ayaa waxaa shaki galinaya isbarbar dhig kale, magaalada Uppsala ayaa waxaa sidoo kale baasa in ka yar 40% dadka imtixaanka gala halka Västerås oo aan sidaas uga fogeyn ay in ka badan 60% baasaan. Qubarada ayaa ku macneeyay in arintaas ay keentay maadaama ay Uppsala tahay magaalo ardaydu u badantahay ayagoon iskuulka Gaariga si fiican u dhameysan, Halka Västerås ay tahay magaalo warshadeed oo dadkeedu si fiican iskuulka u dhigtaan. Si kastaba ha ahaatee warbixintaan ayaa iftiin ku muujineysa sida ay u kala duwan yihiin magaalooyinka kala duwan marka ay timaado imtixaanka Laysanka.
Qaadashada laysanka iyo magaalooyinka
Warbixin ay soo saartay Laanta Isku Socodka ayay ku soo bandhigtay magaalooyinka kala duwan ee Sweden iyo tirada dadka ku baasa imtixaanka Laysanka. Magaalada Skellefteå ee waqooyiga Sweden ayaa ah mida ugu fudud ee dadku ay ku baasaan imtixaanka ayadoo 70% dadka imtixaanka gala ay baasaan.
Farsta oo ka tirsan Stockholm ayaa in ka yar 40% ay ku baasaan imtixaanka. Arintaan ayaa lagu macneeyay in dadka ku nool Skellefteå ay iskuulada dhigtaan halka Farsta dadkeedu ay mashquul yihiin oo aysan iskuulka si toos ah u dhigan.
Balse arintaas ayaa waxaa shaki galinaya isbarbar dhig kale, magaalada Uppsala ayaa waxaa sidoo kale baasa in ka yar 40% dadka imtixaanka gala halka Västerås oo aan sidaas uga fogeyn ay in ka badan 60% baasaan. Qubarada ayaa ku macneeyay in arintaas ay keentay maadaama ay Uppsala tahay magaalo ardaydu u badantahay ayagoon iskuulka Gaariga si fiican u dhameysan, Halka Västerås ay tahay magaalo warshadeed oo dadkeedu si fiican iskuulka u dhigtaan.
Si kastaba ha ahaatee warbixintaan ayaa iftiin ku muujineysa sida ay u kala duwan yihiin magaalooyinka kala duwan marka ay timaado imtixaanka Laysanka.
waa okey lakin waxa is waydiin leh dadka somlaida ah maysan xaq u lahay inay imtaxanka tiyooriiga inay ku galan luuqada somaliga ah madaama wadamada kale dadka ka soo jeeda ay ku galan luuqadooda mise somalida ayan ahayn dad firin fircoon oo dawlada waxaas waydiisataba madamaa ay yihiin dad aan is waafaqsanayn
Jamcaale waxan ka codsnaynaa sxb inaad bal mowduucan aad dadka ku qal qaliso si ay jaliayadaha ama ururada ka jira dagmooyinka ee somalida ahi ay hawshan xil isaga saran waana mowduuc mihiim ah waadna mahadsantahay dhaman bahda rer somaliska.com waxad u haysan shacabka somaliyeed shaqo wanaagsan
Rashiid waloow aanan hubin waxaan maqlay in luqada Soomaaliga lagu gali karo imtixaanka laysanka teoriga. Buugta teoriga oo Soomaali ah way yaalaan dalka oo waxaa laga helaa biblioteka balse xitaa waxaan maqlay in Soomaali lagu gali karo imtixaanka. waan soo xaqiijin doonaa insha Allah.